ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အထူးကျွမ်းကျင် အလုပ်သမားများ စေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA နှင့် အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အထူးကျွမ်းကျင် အလုပ်သမားများ စေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA နှင့် အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA နှင့် အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၃:၀၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ တွင်လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲအတည် ပြုပြီးဖြစ်၍ အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သည့် မြန်မာ၊ဗီယက်နမ်၊ဖိလစ်ပိုင်၊ တရုတ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားစသည့် နိုင်ငံများမှ အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ခေါ်ယူမည့်အခြေအနေအား ပြီးခဲ့သည့်အပတ်တွင် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အာရှနိုင်ငံများဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့ပါကြောင်း၊ ယခုခေါ်ယူမည့်အထူးကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားများ သည် ယခင်နည်းပညာသင်တန်းအလုပ်သမားများကဲ့သို့ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပညာသင်ပြီး အလုပ်လုပ်ဆောင်ရွက်ရန်မဟုတ်ပဲ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွင် နည်းပညာဆန်းစစ်ခြင်းစာမေးပွဲနှင့် ဂျပန်ဘာသာ စကားပြောစာမေးပွဲများပြုလုပ်ပြီး ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများအား အလုပ်ခန့်မည့်ကုမ္ပဏီများမှ တိုက်ရိုက်လာရောက်ရွေးချယ်သည့်စနစ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဆိုပါအလုပ်သမားများအနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားများနှင့်တန်းတူ အခွင့်အရေးနှင့်လုပ်ခလစာရရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအကြား အလုပ်သမား စေလွှတ်ရေးနားလည်မှု စာချွန်လွှာ MOC အားလာမည့်မတ်လကုန်တွင်အပြီးရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံဘက်မှနားလည်မှုစာချွန်လွှာ (မူကြမ်း) ပြုစုပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှအဆင်ပြေချောမွေ့စွာအမြန်ဆုံး (MOC) လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အလုပ်ခန့်အပ်မည့် ကုမ္ပဏီတို့တိုက်ရိုက်လာရောက်ရွေးချယ်ခေါ်ယူခြင်းကပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ပွဲစားများနှင့်ဆောင်ရွက် ခြင်းကိုအားမပေးပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အလုပ်လုပ်မည့်လူငယ်များအနေဖြင့် ဂျပန်ဘာသာစကားသင်ကြားနေမှုများ တော်တော်များများ ရှိနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံဝန်ကြီး အဆင့် (MOC) ရေးထိုးခြင်းမပြုမီ နှစ်နိုင်ငံ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့် (MOC) လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ လုပ်သားများအား ဂျပန်နိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်များမှ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပြီး မြန်မာပြည်တွင်လာရောက်၍ ၃လ သင်တန်း ကြိုတင်ပေးပြီး အလုပ်သမားခေါ်ယူရေးများဆောင်ရွက်သွားရန်ရှိပါကြောင်း နှင့် နှစ်နိုင်ငံ အလုပ်သမားစေလွှတ်ရေး ကိစ္စရပ်များအားရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့်အတူ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျိုးအောင် ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။